काठमाडौँ, १ साउन । सेप्सिसको उच्च जोखिममा रहेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गए रातिबाट अचानक थप जटिल बनेको छ । रातको २ बजेआसपास अचानक छातीमा असह्य पीडा र सास फेर्न गाह्रो भएपछि ...
काठमाडौँ, ३२ असार । नेपालमा मेडिकल कलेज कम भएकाले मेधावी विद्यार्थी पनि डलर तिरेर विदेश जान बाध्य भएको बहस चलिरहेको छ । तर, विदेश कस्ता विद्यार्थी गएका छन् ? मेडिकल पढ्ने योग्यता ...
काठमाडौँ, ३१ असार । जुम्लामा पन्ध्र दिनदेखि अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीले औषधि प्रयोग गर्न नमान्दा उनलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले च्याप्दै लगेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । डा. केसीले औषधि लिएर अनशनमा ...
काठमाडौँ, ३१ असार । परिवार नियोजन लक्षित धेरै कार्यक्रम र योजना सरकारले ल्याए पनि किशोरकिशोरीमा यसको प्रयोग भने निकै कम पाईएको छ । जनचेतना कमी, गोपनीयता नहुने र वैदेशिक रोजगारका कारण उनीहरुमा ...
वार्ता जुम्लामा कि काठमाडौंमा ?
काठमाडौं, ३० असार । सरकार र डा. केसी पक्ष वार्ताका विषयमा टुंगो लगाएर काठमाडौं आउने कि काठमाडौं आएपछि मात्रै टुंगो लगाउने भन्ने अलमलमा छन् । सरकार केसीलाई काठमाडौं ल्याएर स्वास्थ्य सहज बनाएपछि वार्ताको ...
काठमाडौं, २९ असार । वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा कर्यारत डा. भोजराज अधिकारीलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिकले मंगलबार मन्त्रालयमा झिकाएर भनेअनुसार काम गर्न अनुचित दबाव दिएको छ । गृहमन्त्रीको ...
भक्तपुर महामारीजन्य रोगको प्रकोपको उच्च जोखिममा
भक्तपुरवासीले प्रयोग गर्दै आएका ८८ प्रतिशत खानेपानीमा दिसामा पाइने कोलिफर्म पाइएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले बुधबार यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर चन्दले कार्यालयले केही दिन अघिमात्रै सम्पन्न ...
काठमाडौँ, २६ असार । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आईसीयूमा १० दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार उनीसँग टेलिफोन वार्ता गर्न ...
नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा पूर्वाधार, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने क्षमतालगायत आवश्यक मापदण्डलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । रिपोर्टर्स क्लबले आज आयोजना गरेको साक्षात्कारमा वरिष्ठ चिकित्सकले विगतमा पूर्वाधार नै ...